Ọrụ Cryptocurrency na Akwughachi Ụgwọ Ọrụ Ukwuu | Ọrụ di na Paxful
Soro ná ezinụlọ Paxful
N'ebe a na Paxful, anyị na agbasi mbọ ike ịgbanwe ndụ ndị mmadụ na agbanwe kwa ụbọchị. Anyị kwenyere na nnwere onwe ego bụ ikike mmadụ na ebumnuche ime ka nke ahụ bụrụ eziokwu. Soro ihe ebumnuche anyị wee mee ihe dị iche!
Hụ ọkwa meghere emeghe
Ị chọrọ ịma ihe Paxful bụ? Lelee vidiyo a dị egwu ma chọpụta!
A mụrụ Paxful na 2015 site na uche ndị guzobere Ray Youssef na Artur Schaback, bụ ndị rọrọ nrọ itinye ego maka onye ọ bụla chọrọ ya. Ebe otutu nde mmadu enweghi ohere inweta ego,enwere oghere nke odi nkpa. Taa, Paxful bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ahịa Bitcoin isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ na ụwa, na elekọta ihe karịrị nde ndị ahịa 3 n'ụwa niile. Mgbanwe P2P abịa.
Otu ndị isi nke Paxful
Kedu ihe ọ dị ka ịrụ ọrụ na Paxful?
Irụ ọrụ na Paxful bụ ihe nkịtị. Site na ụlọ ọrụ anọ gbasasịrị n'akụkụ ụwa niile, ndị otu anyị nọ na-arụ ọrụ mgbe niile. Anyị na-agba mbọ, na-egwu egwu, ma na agbasi mbọ ike iji hụ na anyị na-aga n'ihu n'egwuregwu ahụ. Ị nwere ike ịhụ ndị ọrụ Paxful na agba egwu, mgbatị ahụ, na eri nri, ma ọ bụ na apụ apụ na anyanwụ. Ọ nwere ike ịdị ka chiiz ma anyị na akpọ ibe anyị ezinụlọ n'ihi na anyị hụrụ ibe anyị n'anya ma hụ ihe anyị na eme n'anya.
Ụmụ ulọ ọrụ anyị
A na akpọkarị Tallinn dị ka "Silicon Valley" nke Europe. Obere obodo ma na-eto eto amara maka agba mmalite elu na nnukwu ihe ochie. Mmụọ ihe ọhụụ na ụzọ nnabata uche nke ndị nọ ebe a, na eme Estonia ebe dị mma maka ndị otu mmepe ngwaahịa anyị iji mepụta ngwaahịa na agbanwe ụwa, na agbanwe ndụ.
Lee ọkwa meghere emeghe
New York City bụ otu n'ime ọdụ ego kachasị ukwuu n'ụwa ma bụrụ nhọrọ dị mma maka Paxful iji bulie ọnụnọ ya ma na-adọta ọtụtụ mmekọrịta di ukwuu. Ebe ịbidoro dị ka mmalite mmadụ abụọ, ụlọ ọrụ New York gbasara ngwa ngwa gụnyere ndị otu sitere n'ọtụtụ ngalaba dị iche iche, gụnyere ndị ọrụ iwu na nnabata anyị na arụ ọrụ n'atụghị egwu iji weta Paxful n'ọkwa ọzọ.
Hong Kong bụ ite mgbaze ọdịbendị nke toro wee ghọọ otu n'ime ụlọ ahịa azụmaahịa na akacha akarị n'ụwa. Ụlọ ọrụ Hong Kong bụ ebe obibi nke ndị otu anyị na azụ ahịa na azụmaahịa, ndị na enwe nnukwu ọganihu na ijikọ ahịa dị iche iche Asian na mba ndị ọzọ.
Manila bụ ọdịbendị akụ na ụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta mmadụ nke Philippines. Otu n'ime ụlọ ọrụ na-etolite n'ike n'ike na Manila bụ ụlọ ọrụ ihe ọmụma teknụzụ-azụmaahịa (IT-BPO). Ọ bụ ya mere Manila ji bụrụ nhọrọ doro anya ka ọ bụrụ etiti nke ahụmịhe ndị aazumahịa anyị na ndị ọrụ ahịa anyị.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ nnwere onwe akụ na ụba site na ego ndị ọgbọ. Site na ikpo okwu echekwara echekwa nke ndị ahia doro anya, anyị choro ibu paspọtụ ego zuru ụwa ọnụ na onye ntụgharị ụwa niile maka ego. Na itinye agumakwụkwọ na mbụ, ndị otu anyị na-achọ inyere ndị mmadụ aka n'akụkụ ụwa niile ijikọ na iwulite mmekọrịta na ibe ha, ikwe ka ha muta ma too n'otu. Na ngwụsị nke ụbọchị, ọ bụ maka ịme ọdịiche pụtara ìhè na ndụ ebe niile. Ezigbo mgbanwe nke ezigbo ndị mmadụ wetara.
Zute ndị otu Paxful!
Ndị ọrụ anyị bụ obi nke Paxful. Anyị sitere na omenala na nzụlite dị iche iche, anyị na amụta ihe mgbe niile site na ibe anyị. Nke kachasị mma? Onye ọ bụla nwere ike ịnwe asụsụ na ọdịbendị dị iche iche. Anyị nwere ike ịnwe ndị otu ngwaahịa raara onwe ha nye mana nyiwe anyị bụ nsonazụ nke ọrụ mmekọrịta na nzaghachi sitere na ndị otu na ngalaba niile.
Dị ka ezinụlọ ọ bụla, ogbaghara nwere ike ịda ebe a, mana na ngwụsị nke ụbọchị, ịhụnanya na agụụ maka ihe anyị na-eme jikọrọ anyị ọnụ. Anyị etolitela ntakịrị ntakịrị kemgbe anyị bidoro ma anyị na-ele anya mgbe niile maka ume ọhụrụ dị ike. Tinye ugbu a ma chọpụta otu ị ga-esi tinye na ịtụnanya anyị!
Anyị kpuchiri gị
Anyị na elekọta ahụike gị
Anyị na enye nri ehihie na nri abalị kwa ụbọchị, ndị otu mgbatị ahụ ị họọrọ, ahụike dị iche iche na mgbakwunye nri, ịhịa aka n'ahụ na nleta chiropractic, yana ihe omume metụtara ahụike. Nlekọta ahụike n'ịntanetị na ndị dọkịta kachasị elu.
Anyị raara onwe anyi nye na uto gị
Site na ịgagharị mahadum gburugburu ụwa iji nye akụrụngwa na akparaghị ókè maka ọzụzụ na mmepe ọkachamara, anyị kwenyere na naanị ụzọ dị n'ihu bụ site na uto na mmụta na aga n'ihu.
Ọ na amasị anyị ịhapụ
Ị gbanwe ụwa adịghị mfe. Ya mere iji dozie ịrụsi ọrụ ike niile, anyị na-enye ihe omume, mmemme, na ọbụlagodi ezumike ụlọ ọrụ zuru oke naanị maka ihe ọnụ, ahụmịhe, yana njikọ ị nwere ike iwulite na ndị ọrụ ibe gị n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa.
Mmepe Ngwa ọrụ nro
Obi Paxful. Ndị ọrụ ngwaahịa na-arụ ọrụ na arụ ọrụ n'kie n'ike, na-emepe ngwaahịa ọhụrụ, na-emelite ndị dị ugbu a, na echekwa ọdịnihu nke ego isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ.
Ndị otu ngwaahịa na arụ ọrụ na arụ ọrụ na ngwa ngwa, na eche mgbe niile banyere ụzọ ọhụrụ iji melite ahụmịhe onye ọrụ anyị. Ndị na-emepụta ihe, ndị Njikwa ngwaahịa na Ndị nyocha na-arụ ọrụ anwansi ha, na-agbanwe echiche dị ka ngwaahịa na njirimara ndị bara uru.
Nkwado & Wayo na Ahụmịhe Ndị Ahịa
Ngalaba Paxful kachasị na agbasasị n'etiti kọntinent dị iche iche iji hụ na nkwado 24/7 na mkpebi nghọtahie . Ndị otu a na arụ ọrụ na ịchekwa platfọm anyị na ndị ọrụ anyị, na ahụ na emere ihe ndị achọrọ maka usoro iwu na eduzi nyocha blockchain dị elu.
Ndị a bụ ndị na agbasa ozioma nke ego Isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ na ụwa. N'iji usoro mgbasa ozi ọdịnala na nke niche, ha na achọ iru ndị na ege ntị n'ụwa site na agụmakwụkwọ, ọdịnaya, na ụlọ obodo.
Ngalaba ndị a bụ mmanụ igwe anyị. Ha na ahụ na akwụkwọ anyị dị ọhụrụ yana na ọrụ anyị niile dị n'iwu.
Ọrụ ndị mmadụ
Ndị na ahụ na Paxful bụ ebe kachasị mma ebe ọrụ! Ha na agba mbọ ndị anyị niile na agba, ma na agba ọsọ niile metụtara mmepe nhazi, yana njikwa ụlọ ọrụ na ọrụ nhazi dị iche iche.
Otu esi esonye na ezinụlọ Paxful
Mmekọrịta kwesịrị ekwesị na ngwa
Kwado maka oku
Olee otu i si acho N'ajụjụ ọnụ gị?
Guo ihe n'enu #BuiltWithBitcoin na ebumnuche anyị iji nweta ikpe ziri ezi akụ na ụba site na Bitcoin.
Lelee ọwa mgbasa ozi anyị. Ọ bụrụ na ịmaghi ihe Bitcoin bụ, mee nyocha iji ghọta isi mmalite nke teknụzụ ya na akụnụba ya
Lelee ihe ndekọ akụkọ mgbasa ozi anyị iji nweta ọdịbendị na usoro nkwukọrịta anyị
Gwa anyị karịa ihe dị na akwukwo oru gị! Gịnị mere ị jiri pụo iche?
Soro #lifeatpaxful na Instagram ma zoro ezoro n'ime ndụ anyị na adị kwa ụbọchị
Lelee ndị ọzọ na Instagram